စာ ဖတ် မပျင်း ပါနဲ့ ….ဖတ်ကြည့်စေ ချင်ပါတယ် ညီမလေး တို့ရေ ဆင်းရဲတဲ့ လင်မယား ၂ ယောက်မှာ စာတော်တဲ့ သမီးလေး ရှိတယ် ၊ တစ်နေ့ သမီးလေးဟာ အတန်းတင် စာမေးပွဲမှာ ပထမ ရတယ် ။ အဖေဟာ ဝမ်းသာလွန်းလို့ လိုချင်တာ ဝယ်ပေးမယ် ပြောတယ်
Shwe | March 20, 2020
“နိမိတ်” တွေ ဟာ သိပ်ကြောက် စရာ ကောင်းတယ်။ (၁) “စောက် ရမ်းတွေ လမ်းပျောက်နေ ပါပြီ” ဆိုတဲ့…”နိမိတ်”က …”ရေကြီး ပြီး လမ်းတွေ ပျောက်”တယ်။ (၂ ) “ဖုန်ရှု လိုက်”ဆိုတဲ့ “နိမိတ်”က …”မြေပြို /မြေပိ” သေကြတယ်။ “ အသံကို မြင်ရသလား?” ဆိုတာနဲ့ပက်သက်ပြီး
Shwe | March 19, 2020
တက္က သိုလ် ဝင် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုပြီးကြသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ညီငယ် ညီမငယ် များ သို့……. ယနေ့ ဆိုလျှင် စာမေးပွဲဖြေ ဆို ပြီးကြမည်ြ ဖစ် ပါသည် ။ မိမိတို့ မိဘများသည် ငွေကြေးမြောက်များစွာ အကုန်ကျခံ ၍ ယခုချိန်ထိ ကိုယ့် သားသမီးတွေ ပညာတတ်မြောက်စေချင်သော
ဘုန်း ကျက် သရေ လာဘ် ပွင့်် ဦးခေါင်း မင်္ဂလာ ပြုရအောင် အားလုံးမင်္ဂလာပါ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ချစ်ခင်လေးစာကြသော မိသားစုဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟအပေါင်း တို့ခင်ဗျာ မနှစ်က တကြိမ်ရေးသားထားသလို မြန်မာနှစ်ရဲ့ ပထမလ ဖြစ်တဲ့ တန်ခူးလဆန်း ၁ ရက်နေ့မှာ ဦးခေါင်း ဆေးမင်္ဂလာပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်…. ရှေးဆို ရိုးစကားလေး နဲ့ အညီ
Shwe | March 10, 2020
နာမည်ကျော် ထိုင်ဝမ် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ‘ကျင်းပိုင်’ က သူမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အရှုပ်တော်ပုံကို မြန်မာနိုင်ငံက “Let’s Talk” လို ထိုင်ဝမ် တီဗီအစီစဉ် တစ်ခုကနေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောချလိုက်ပါတယ်။ ‘ကျင်းပိုင်’ ဟာ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ နဲ့ စတင် ဆုံဆည်းပြီး မကြာခင်မှာပဲ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သေချာ မသိကြသေးခင်
ဆွေမျိုးတိုင်း မကောင်းဘူး မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆွေမျိုးတွေကတော့ တော်တော် ငွေခင်တတ်တဲ့ အမျိုး.. ငွေလေးမြင်ရင် ဟိုးအဝေးကြီးရောက်နေလဲ ပြေးပြီးလာနှုတ် ဆက်ဖော်ရတယ် ။ အမျိုးဘယ်လိုတော်တာ ဘယ်ညာတော်တာ လာပြီးစပ်ပြတယ် ။ ဘူးသီးကို မြင်နေပြီပဲ အရီးခေါ်ဖို့လဲ ဝန်မလေးဘူးလေ ဒါပေမယ့် လက်ထဲမှာ ငွေမရှိတဲ့အခါလို့ ဆက်ပြီးပြောဖို့တောင် အချိန်မရဘူး။ အနီးအနားမှာ
သစ် တံခါး ဆရာတော် မှ နည်းလမ်းပေး တော်မူသည့် မိမိအိမ်ဂေဟာ ကျက်သရေတိုး၍မင်္ဂလာရှိလာဘ်ပွင့်အောင် လုပ်ဆောင် ရမည်များမှာ ၁။ နံနက်အိပ်ယာထသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် မျက်နှာသစ်ကာ သွားတိုက်ပီးပါက ဘုရားသောက်တော်ရေလဲ ဆီမီးပူဇော်ပါ ဘုရားကျောင်းဆောင် သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပါ ၂။ ဆွမ်းကပ် / ကော်ဖီတစ်ခွက်ကပ်ပါ သစ်သီးလှူလည်း ရပါတယ် ၃။ ဂုဏ်တော်တစ်ပါးပွား
ငွေတွေ ထိန်းမနိုင်အောင် ဝင်လာမယ့် ဂါထာတော် မ နက် အိပ်ရာ ထ မျက်နှာ သစ်ပြီး သည်နှင့် မိ မိ ၏ ပိုက်ဆံအိတ် ကို ကိုင် မြတ်စွာ ဘု ရားကို အာ ရုံ ပြု ပြီး ရွတ်ဆို ပါ က ငွေ
စင်ကာပူ မှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် public panic ဖြစ်သွားတယ်။ အားလုံး ခြောက်ခြားပြီး အကုန် ပြေးဝယ်၊ ပစ္စည်းပြတ်လပ် ကုန်တယ်… ရေးသားသူ – သက္ကမိုးညို မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ကံကောင်းတာက အခုအထိ သေချာတဲ့ ကူးစက်လူနာ မတွေ့သေးဘူး။ အခုအချိန် အထိ ဆိုရင်တော့ ရှိရဲ့နဲ့ မတွေ့တာ